सांसद रायमाझीकाे प्रश्न- राजदूतहरू डलर खान मात्रै बस्छन् ? नेपालीलाई स्वादेश फर्काउन पर्दैन ? « News24 : Premium News Channel
सांसद रायमाझीकाे प्रश्न- राजदूतहरू डलर खान मात्रै बस्छन् ? नेपालीलाई स्वादेश फर्काउन पर्दैन ?
काठमाडाैं, २ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वादेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रायमाझीले विदेशमा नेपालीहरु सडकै सुतिरहेका र उनीहरूलाई स्वादेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘विदेशमा नेपालीहरू सडकमै सुतिरहेका छन्, ती नेपाली नागरिकहरूलाई स्वादेश ल्यान पर्छ कि पर्दैन ?’
काेरियाबाट आएकाे एउटा चिठ्ठि देखाउँदै उहाँले भन्नुभयाे, ‘कोरियामा रहेका लगभक एक हजार नेपाली नागरिककाे भिषा सकिएको छ । ती मान्छेलाई ल्यानका लागि यहाँबाट नेपाल एयरलाइन्सकाे जहाज पठाउने, दुई देशबीच हाम्रो हवाई सम्झैता भएको छैन, त्यसकारण नेपालको जहाज आउन पाउँदैन भनेर काेरियाबाट नेपाली दूतावासकाे चिठ्ठि आएको छ ।’
पर्यटन मन्त्रालयमा हवाई सम्झैता नभएकाे ठाउँमा जहाज पठाउन मिल्दैन भनेर साेच्ने मान्छे नभएकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘त्यहाँ जहाज पठाउने भनेर पर्यटन मन्त्रालयले कसरी सोच्यो ? पर्यटन मन्त्रलयमा यस्तो गर्नु हुन्न भनेर सोच्ने मान्छे कोही पनि छैनन् ?’ अरु धेरै ठाउँबाट यसरी नै चिठ्ठि आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अरू देशले नै नेपाली नागरिक फर्काइदिन्छु भन्दा पनि सरकारले कमिसनको लागि जहाज पठाउने गरेकाे सांसद रायमाझीले आराेप लगाउनुभयाे । ‘अरुदेशले ल्याइदिन्छु भन्दाभन्दै पनि यहाँ किन आफ्नै जहाज पठाउनुपर्ने ? किनभने यहाँ कमिसनको खेल छ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
सांसद रायमाझीले राजदूतहरू के गेर बस्छन् भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयाे । माल्दिभ्स र कोरियामा अहिले पनि राजदूत छैनन्, राजदूतहरु के गेर बस्छन् त्यहाँ ? केवल डलर खान मात्रै बस्छन् ? नेपाली जनतालाई स्वादेश फर्काउन पर्दैन ?,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘तर उनीहरु आफै क्वारेन्टाइनमा छन् । कोहीसँग पनि सम्पर्क छैन । अनि कसरी हुन्छ ? यो अवस्थामा राजदुतहरूले जनतालाई हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ? के को लागि त्यहाँ राजुदूत पठाइयो यहाँबाट ?